ADHD ဆေးဝါးများပြတ်တောက်သွားသောအခါ - ဆေးညွှန်းပြန်အမ်းခြင်းကိုမည်သို့စီမံရမည်နည်း - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
သတင်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ပြင်းထန်သောအားကစား ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> ADHD ဆေးဝါးများပြတ်တောက်သွားသောအခါ - ကျောင်းပြင်ပစုန်းမနာရီကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုရှိသော hyperactivity disorder (ADHD or ADD) ရှိသောသင်၏ကလေးသည်ကျောင်းမှပင်ပန်းပြီးဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမှအိမ်ပြန်ရောက်သည်။ ဒါကြောင့်ထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်စာ, နေ့စဉ်ဆေးထိုးစတင်ရန်အချိန်င်အခါ ADHD ဆေးသည်ကျိုးပဲ့ပါသည် ။ Epic အရည်ပျော်ကျခြင်းများပေါ်ပေါက်လာပြီးသည့်နောက်တွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်ရန်နာရီများစွာကြာနိုင်သည်။
ဆေးရဲ့ထိရောက်မှု၏အမြီးအဆုံးမှာရောဂါလက္ခဏာများ၏မီးတောက်ခေါ်ကြသည် ADHD ဆေးပြန်ခုန်ထွက်လာတယ် သို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရုံ ADHD ပြန်ခုန်ထွက် ။ သင်ဆေးသောက်ပြီးချိန်တွင်သင့်ကလေးကိုမိနစ် ၆၀ ခန့်သင်တွေ့မြင်ရသောပြင်းထန်သောအပြုအမူပြောင်းလဲမှုသည်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သောလှုံ့ဆော်ပေးသောဆေးကို ဦး နှောက်၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတိုတောင်းသော ADHD ဆေးများဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည် Ritalin , Adderall သို့မဟုတ် Focalin ။ သို့သော်၎င်းသည်ကြာရှည်စွာသောက်သောဆေးများနှင့်လည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဘယ်လို ADHD ဆေးပြန်ကောင်းလာတယ်
၁။ ADHD ပြန်ခုန်ထွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုဖြေရှင်းပါ။
သင့်ကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အလျင်အမြန်လှုံ့ဆော်ပေးသောဆေးကိုအလျင်အမြန်ပြုလုပ်သည် (သို့) metabolize- ပြုလုပ်သောအခါ ADHD ပြန်ခုန်ထွက်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကလေးသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြန်လျှင်ရှစ်နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိကြာရှည်ခံရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဆေးသည် ၆ ရက်သာကြာနိုင်သည်။ အကျိုးရှိသောဆိုးကျိုးများသည်နောက်စီစဉ်ထားသောဆေးမထိုးမီဟောင်းနွမ်းသွားပြီးယခင်ကထိန်းချုပ်ထားသောရောဂါလက္ခဏာများသည်ရုတ်တရက်ပြန်ပေါ်လာပြီးမကြာခဏ ပို၍ ပင်ပြင်းထန်သည်။
ကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်သော ADHD ဆေးများ XR Adderall , ဖျော်ဖြေပွဲ နှင့် Vyvanse - သွေးစီးဆင်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းဖြုတ်ချရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကလေးသည်တိုတောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူနေလျှင်၊ အမေရိကန်ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါကုသရေးအကယ်ဒမီ (AACAP) သည်သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ကျောင်းမှပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆေးဝါးအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာမကျဆင်းစေရန်တားဆီးနိုင်သည့်မတူညီသောပေးပို့စနစ်သို့ပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။ သို့မဟုတ်ကျောင်းသူနာပြုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါ။ ဒုတိယနေ့တွင်ဆေးဝါးမွန်းတည့်ချိန်တွင်ဆေးသောက်ရန်အတွက်ကျောင်းပြီးချိန်ညနေခင်းအထိကျယ်ပြန့်သည်။ သို့သော်ကလေးများအနေဖြင့်အိမ်သို့ယူရန်သို့မဟုတ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
၂။ ညနေပိုင်းတွင် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်သဘာဝဆေးတစ်လက်ကိုထည့်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အကျိုးရှိသည်၊ Sanford Newmark, MD UCSF Osher စင်တာ၌လက်တွေ့အစီအစဉ်များ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်စာရေးဆရာ၊ မူးယစ်ဆေးမရှိရင် ADHD ။ ကျွန်ုပ်၏လူနာများ၏ ADHD ၏မိဘများကကျွန်ုပ်အားမကြာခဏနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကလေးများကျောင်းနှင့်အိမ်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအကြွင်းမဲ့သော့ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ သုတေသနကဖော်ပြသည် ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် dopamine နှင့် noradrenergic စနစ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဆေးများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ ADHD ဦး နှောက်ကိုပေးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အက်ဒွပ် Hallowell, MD , စာရေးဆရာ အာရုံမှမောင်းနှင် သဘောတူတယ်။ ကျောင်းမှအိမ်မှစက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးများအားအိမ်အပြင်ဘက်သို့ပို့ခြင်းဖြင့်ခလုတ်ခုံပေါ်ပြေးခုန်နိုင်ခြင်း တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့်အိမ်စာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပဲအလုံအလောက်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည်သင့်ကလေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကူညီနိုင်သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှု၏မိနစ် ၆၀ အတွက်နေ့စဉ်ထောက်ခံချက်။
တစ် ဦး တည်းအစားအသောက်ရွေးချယ်မှုမကြာခဏ ADHD လက္ခဏာတွေကိုထိန်းချုပ်ရန်မလုံလောကျပေမယ့် သုတေသနအချို့ ADHD ရှိကလေးများသည် tryptophan နည်းပါးကြောင်း၊ အမူအကျင့်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့် dopamine, noradrenaline နှင့် serotonin ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
ကလေးအများစုသည်မနက်စာနှင့်နေ့လည်စာ စား၍ အလွန်အကျွံထုတ်ယူထားသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များဖြင့်အစာစားပြီးလျင်မြန်စွာအစာကြေနိုင်ပြီးမတည်ငြိမ်သောသကြားဓာတ်ပမာဏကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစာတစ်ခုချင်းစီတွင်ပရိုတိန်းထည့်ခြင်းသည်သွေးသကြားဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုရရှိစေသည်။
တနည်းအားဖြင့်ပန်းသီးချပ်များထဲမှဒိန်ချဉ်၊ အိမ်သုံးဒိန်ခဲသို့မဟုတ်မြေပဲထောပတ်ကဲ့သို့ပရိုတင်းများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောကျောင်းပြီးသောသရေစာရှိခြင်းသည် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ဥပမာအက်ပ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းခြင်း အေးဆေးတည်ငြိမ် သို့မဟုတ်တစ် ဦး Mandala အရောင်စိန်ခေါ်မှုစိတ်ခံစားမှုထွက်ဖျော့ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ပိုမို၍ သုတေသနများကစိတ် ၀ င်စားစရာနည်းနည်းပါးပါးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ပင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေနေသည် ခရစ္စတိုဖာဝီလာ, Psy.D. ဟားဗတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းစိတ်ပညာရှင်နှင့်စာရေးသူဖြစ်သည် ခံနိုင်ရည်မြှင့် ။
ဆက်စပ် : Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံနိုင်မလား?
ည ၇ နာရီခန့်တွင်ဆေးဝါးပြတ်တောက်သွားသည်ကိုသတိပြုမိပါကအိမ်စာကိုပုံမှန်လုပ်သောအခါ၊ ကျောင်းပြီးသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပြန်လှန်ကြည့်ပါ။ ဆေးဝါးသုံးစွဲနေဆဲကာလအတွင်းကြီးမားသောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားသောအလုပ်များကို ဦး စားပေးရွေးချယ်ပါ။ ညနေခင်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းခြင်း၊ စိတ်မရှည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်သတိမထားမိခြင်းကဲ့သို့သောမိသားစုများအတူတကွညစာစားခြင်း၊ သို့မဟုတ် Wii Sports ၏ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းများတွင်မပါ ၀ င်သောပျော်စရာသို့မဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အခါတိုင်း၊ သင့်ကလေး၏စနစ်မှဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်အခါသက်သာစေမည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
Stimulants ဆေးများသည် ADHD ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်အတွက်သူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုပထမ ဦး ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောဆေးဖြစ်သည် ကလေးများ၏ 70-80% ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ခုတည်းသော option ကိုမရှိကြပေ။ အကယ်၍ သင်၏ဆရာ ၀ န်နှင့်ဆေးသောက်ချိန်နှင့်အချိန်ကိုက်ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ သင့်ကလေးသည် ADHD အလွန်အကျွံပြန်ကောင်းလာခြင်းကိုကြုံတွေ့ရပါကအခြားဆေးတစ်မျိုးကိုကြိုးစားရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ADHD ကိုကုသရန် FDA မှခွင့်ပြုထားသော non-stimulant ဆေးသုံးမျိုးရှိပါသည်။ Strattera , နင် နှင့် ကာဗာ ။ သော်လည်း AACAP မှတ်စုများ , သူတို့သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်ထိရောက်သောနည်းပြီးစိတ်ကြွဆေးများသည်ထိရောက်မှုမရှိသောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများသည်သည်းမခံနိုင်မှသာစမ်းသပ်သင့်သည်။
ဆရာများထံမှသင်၏ကလေးသည်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဲ့သို့တစ်နေ့လုံးပြုမူသည်ဟုကြားရသော်၎င်းသည်သူသို့မဟုတ်သူမအိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အနည်းငယ်သောနဂါးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်ကြားရသည်မှာခဲယဉ်းသည်။ သတိရပါ, ADHD ပြန်ခုန်ရုံမကောင်းတဲ့အပြုအမူမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ဆေးသောက်ပြီးနောက်အဆုံးတွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည်။ အချို့သောသေးငယ်သောဆေးညွန်းချိန်ညှိမှုများသို့မဟုတ်တီထွင်ကြံဆမှုအစီအစဉ်များဖြင့်သင်သည်သင်၏အိမ်သို့အမိန့်နှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည် (နှင့်လုပ်နိုင်သည်) ။
Zoloft ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
ပြင်းထန်သော ၀ မ်းချုပ်ခြင်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း